မာရိ၏ယူဆချက် – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / Church ကို / မာရိသညျ / မာရိ၏ယူဆချက်
Duccio di Buoninsegna အားဖြင့်အပျိုကညာ၏သေခြင်းသို့
အဆိုပါ Assumption ဟူသောယုံကြည်ချက်က Mary ဖြစ်ပါတယ်, သူမ၏မွကွေီးအသက်တာ၏နိဂုံးမှာ, ကောင်းကင်ဘုံသို့ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုသိမ်းယူခဲ့သည်. ဒါဟာသမ္မာကျမ်း၏အမျိုးမျိုးသောကျမ်းပိုဒ်များတွင်ဆိုလိုသည်, ဖြစ်နိုင်အများဆုံးကှကျကှကျကှငျးကှငျးထဲမှာ ဗျာဒိတ်ကျမ်း 12, နှင့်အစောပိုင်းခရစ်ယာန်များကယုံကြည်ကြသည်ခဲ့သည်, ရှေးဟောင်းမရပါနှင့်ရေးထားသောစာအားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်. အဆိုပါ Assumption ၏ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အကြီးမြတ်ဆုံးသမိုင်းသက်သေပြ, သော်လည်း, အဘယ်သူမျှမတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းအစဉ်အဆက်မာရိရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအားအပိုင်အခိုင်အမာသောအချက်ဖြစ်ပါသည်.1 တစျခုမှာမာရိ၏ကိုယ်ခန္ဓာခဲ့နြို, ဝေးအားဖြင့်အများစုကသူတော်စင်၏ချီးမြှောက်ခြင်း, မြေကြီးပေါ်မှာကျန်ရစ်, ခရစ်တော်၏နောက်လိုက်များကကောင်းစွာသတိပြုမိကြပြီ.
မာရိရဲ့သွားတာ၏အရပျကိုရည်မှတ်နှစ်ခုကိုမတူညီတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ဖြစ်ပျက်: ယေရုရှလင်မြို့၌တ Point; ဧဖက်ဖို့အခြား. နှစ်ဦး၏, ယခင်အစဉ်အလာအဟောင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသိသိသာသာဖြစ်ပါသည်. စိတ်ဝင်စားစရာလုံလောက်, တစ်ဦးအချည်းနှီးသော, ပထမရာစုသင်္ချိုင်းတွင်း၌ယေရုရှလင်မြို့၌သူမ၏သွားတာ၏ site မှာတူးဖော်နေစဉ်အတွင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် 1972 (Bellarmino Bagatti မြင်, မိုက်ကယ် Piccirillo, နှင့်အဲလ်ဘတ် Prodomo, O.F.M., ဂေသရှေမန်အတွက်အပျိုစင်မာရိ၏ဂူမှာနယူးရှာဖွေတွေ့ရှိမှု, ယေရုရှလင်မြို့: Franciscan ပုံနှိပ်စာနယ်ဇင်း, 1975). ကပါလက်စတိုင်းတှငျနထေိုငျသူအအစောပိုင်းအဘတို့ကရည်ညွှန်းမခံခဲ့ရကတည်းကပညာရှင်အချို့ကဒီသင်္ချိုင်းရဲ့စစ်မှန်မှုကိုသံသယရှိသည်ဟု, ထိုကဲ့သို့သောယေရုရှလင်မြို့စိရယျလျအဖြစ် (ဃ. 386), Epiphanius (ဃ. 403), နှင့်ဂျရုမ်း (ဃ. 420). ဒါပေမယ့်, ရှေးဟောင်းသုတေသန Bellarmino Bagatti ထောက်ပြအဖြစ်, ဒါကြောင့်အဘိဓါန် Judeo-ခရစ်ယာန်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်မှာရပ်လျက်နေသောကြောင့်မာရိရဲ့သင်္ချိုင်းဂူယေဘုယျအားဖြင့်လူမျိုးခြားဇာစ်မြစ်၏အစောပိုင်းခရစ်ယာန်များကရှောင်ကြဉ်ခဲ့သည်, အဘယ်သူသည် “မယူမှားလျှင် schismatics စဉ်းစားခဲ့ကြ” (Ibid ။, p. 15). တူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်များအတွက်, အခြားသန့်ရှင်းသောဆိုဒ်များ, ထိုကဲ့သို့သောအထက်ခန်းအဖြစ်, တစ်ခုခုကိုအစောပိုင်းအရေးအသား၌ထင်ရှားဘူး (Ibid ။). ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာရောမဗိုလ်ချုပ်ကြီးတိတု၏တပ်ဖွဲ့များကယခုနှစ်တွင်ယေရုရှလင်ခွဲခဲ့သောကိုထိုအခါသတိရသင့်တယ် 70, ထိုအကျိုးအပဲ့သည်အောက်အရပ်ဂျူးဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာမှသန့်ရှင်းသောဖုံးကွယ်သောနေရာများ. တွင် 135, ဧကရာဇ်မင်း Hadrian သန့်ရှင်းသောဆိုဒ်များ၏အပျက်အယွင်းပေါ်ကနေအယူမှားဘုရားကျောင်းဆောက်လုပ်၏ express ကိုရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူနောက်တဖန်ထိုမွို့မြားတငျထား. အဆိုပါမာရိရဲ့သွားတာ၏အစက်အပြောက်များနှင့်အခြားသန့်ရှင်းသောအရပ်တို့ကိုမဧကရာဇ်ကွန်မဟာတဖြည်းဖြည်းခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့သန့်ရှင်းဆိုဒ်များ restore စတင်မှာအနည်းဆုံးရသောအခါစတုတ္ထရာစုတိုင်အောင်အပျောက်ကျန်ရစ်, အတွင်းသန့်ရှင်းသောဘုရားသင်္ချိုင်းနှင့်အတူစတင် 336.] အဆိုပါ Assumption တစ်ဦးကိုယ်ထင်ရှားရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကိုယ်တော်ပြီးနောက်အောက်ပါခရစ်တော်ရဲ့တပည့်၏ဥပမာတစ်ခုပေးစွမ်းသည်, ခရစျယာနျမြျှောလငျ့ထားတဲ့များအတွက်အဖြစ်မှန်ရန်ညွှန်ပြ. နောက်ဆုံးမှာ, သူကသူမ၏သန့်ရှင်းခြင်းငှါမ attests, ထိုမှတပါး, ဒါပေမယ့်သခင်ယေရှု၏သန့်ရှင်းသောတန်ဆာအား, အဘယ်သူ၏အကောင့်ပေါ်မှာသူမကိုအထူး prerogatives လက်ခံရရှိ.
ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲရစျယာအားဖြင့်ယုံကြည်သောခဲ့စဉ်တွင်, အ Assumption တရားဝင်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Pius XII အတွက်အားဖြင့်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းတစ်ဦးတရားသေအယူဝါဒကြေငြာခဲ့သည် 1950. စင်စစ်တဦးလူ့လူတစ်ဦး၏ဂုဏ်သိက္ခာဆန့်ကျင်ဤမျှလောက်များစွာသောသင်္ချိုင်းမတရားမှုမျက်မြင်တစ်ရာစုအလယ်ပိုင်းကိုမှာကမ္ဘာကိုမာရိရဲ့ကိုယ်ထင်ရှားရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအတည်ပြု၌ဘုရားသခင်၏မတ်ေတာသည်ပညာကိုတွေ့နိုင်ပါသည်. ထိုတရားသေအယူဝါဒရဲ့အကွှေးကျွောခွငျး၏ထိုအချိန်က, ကမ္ဘာပေါ်တွင်နာဇီအသေခံစခန်းကြောက်မက်ဖွယ်ရာများအကြောင်းမှထွန်းသစ်စနှင့်အလျင်အမြန်အမှေးသေးသောသူငယ်၏ State-protected သတ်ဖြတ်မှုချဉ်းကပ်ခဲ့သည်. အမြိုးသမီးမြားနှငျ့မိခင်၏သူမ၏အကြီးအကဲမှေးလုပျငနျး၏ nobility အထူးသဖြင့်ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအားဖြင့်ထိပါးစော်ကားမှုရှိခဲ့ကြပြီ, သူမ၏အပြင်ပန်းအလှအပအပေါ်သို့တပ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်တပ်မက်၏ object တစ်ခုအားသူမ၏လျှော့ချဖို့အစဉ်အဆက်ကိုရှာသော. ဤကြွေးကြော်ဖို့ကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးမတူဘဲ သေမင်း၏ယဉ်ကျေးမှု, မာရိရဲ့ Assumption womanhood နှင့်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမိန့်, လူ့လူတစ်ဦး၏, အားကောင်းတဲ့လမ်းအတွက်.
အ Assumption ၏တရားသေအယူဝါဒခရစ်တော်၏သိုးတို့ကိုအစာကျွေးဖို့ဘုရားကျောင်းရဲ့အခွင့်အာဏာအပျေါ၌ကျိန်းဝပ် (cf. ယောဟန်သည် 21:15-17; လုကာ 10:16) သူ့ဘုရားကျောင်းကအမှန်တရားကိုသွန်သင်ကြလိမ့်မည်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ရဲ့ကတိ (cf. ယောဟန်သည် 14:26; 16:13; Matt. 16:18-19; 1 တိ. 3:15). ဤသည်မမှားယွင်းခွင့်အာဏာကိုအမြဲတမ်းအငြင်းပွားမှုများသစ္စာရှိသောအကြားထမြောက်တော်မူသောအခါစစ်မှန်တဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးဟောပြောဖို့ယုံကြည်စိတ်ချပြီ. ကျွန်တော်တို့ဟာယေရုရှလင်မြို့ကောင်စီ၏ခေါ်ဆိုမှုအတွက်ဒီမြင် (တမန်တော်ဝတ္ထု 15); တမန်တော်ပေါလု၏ရှာထဲမှာ’ မိမိအကူးပြောင်းပြီးနောက်သူ့အကဟောပြောခြင်းနှစျပေါငျးမြားစှာ၏ခွင့်ပြုချက် (ဂလ. 2:1-2); နှင့်အဆုံးစွန်သော Ecumenical ကောင်စီ၏လုပ်ရပ်အတွက်, သောခရစ်တော်၏ဘုရားကိုကြွေးကြော် 325, အတွင်းသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်၏ဘုရား 381, နှင့်မာရိရဲ့ဘုရားသခငျ့သားဖွား 431.
Theological, အ Assumption အစင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောအယူအဆမှအနီးကပ်ဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်, မာရိသညျဖျောပွရာ, ဘုရားသခင်ထံမှအထူးကျေးဇူးတော်အားဖြင့်, သူမ၏ဖြစ်တည်မှု၏ပထမဦးဆုံးအခိုက်အထဲကမူရင်းအပြစ်တရား၏အအစွန်းအထင်းမှနှမြောခဲ့. အပြစ်တရား၏လက်မှသူမရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုမာရ်နတ်နှင့်ရွေးနှုတ်၏မိခင်များအကြားရန်ငြိုးနေရာက Man ၏ကျဆုံးခြင်းအပျေါသညျဘုရားသခငျရဲ့ကတိကိုအတွက်သွယ်ဝိုက်ဖြစ်ပါသည် (ဗိုလ်ချုပ်. 3:15). နောက်ကျောတမန်တော်ကြိမ်မှ Going, အသင်းတော်သစ်ကိုဧဝအဖြစ်မာရိကလေးစားကြည်ညိုခဲ့သည်, သစ်အာဒံ၏သစ္စာရှိသောသူ helpmate. ပထမဦးဆုံးဧဝကိုစာတန်၏မုသာစကားကိုယုံပါသကဲ့သို့, တစ်ပြိုလဲကောင်းကင်တမန်, နှင့်ငြင်းပယ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဤလောကသို့အပြစ်နှင့်သေခြင်းယူဆောင်; ဒါကြောင့်နယူးကဧဝဂါဗြေလ၏အမှန်တရားတွေယုံကြည်သည်, တစ်ဦးကောငျးကငျတ, ဘုရားသခငျ့အစီအစဉ်နှင့်အတူပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့်ဤလောကသို့ကယျတငျတျောမူခွငျးနှငျ့ဘဝယူဆောင်. သစ်ဧဝကိုအဖြစ်မာရိကစဉ်းစားခုနှစ်တွင်, ထိုမှတပါး, ငါတို့သည်ငါတို့၏ရွေးနှုတ် orchestrating အတွက်သဘောပေါက်ဖို့လာ, ဘုရားသခင်ကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပကတိလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုလဲခြင်းဖြစ်ရပ်များပြောင်းပြန်. မူလက, ဥပမာအားဖြင့်, အာဒံကိုပထမဆုံးရောက် လာ.; နဲ့ဧဝကိုသူ့အသားကနေဖွဲ့စည်းခဲ့သည်. ရွေးခုနှစ်တွင်, မာရိသညျ, သစ်ဧဝကို, ပထမဦးဆုံးရောက် လာ.; ခရစျတျော, သစ်အာဒံကို, သူမ၏အသားကိုမှဖွဲ့စည်းခဲ့သည်. တိုက်ဆိုင်, ပဋိညာဉ်တရားသစ်အတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့လူကိုအမေနဲ့သားဖြစ်ကြသည်အဘယ်ကြောင့်ဤ, အာဒံနဲ့ဧဝကိုအဖြစ်မအိမ်ထောင်ဖက်ခဲ့.
မာရိသကျဆုံးမီဧဝရဲ့အပြစ်ကင်းစင်သိမ်းယူကြောင်းသူမကသူ့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကနေဖွယ်ရှိကင်းလွတ်ခွင့်ခဲ့သည်ကိုဆိုလိုသည်: အလုပ်သမားခြင်းဝေဒနာနှင့်ကိုယ်ထင်ရှားသေဆုံး (cf. ဗိုလ်ချုပ်. 3:16, 19; ရွမ်. 6:23). လုံးဝဤအရာကနေဆင်ခြေမပေးရင်တောင်, သို့သော်, ထူးခြားသော Grace သားဘွားခြင်းနှင့်သေခြင်း၌သူမ၏ပေးခဲ့မှာအနည်းဆုံးကြောင်းသင့်လျော်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.2
လူမျိုးခြား da Fabriano အားဖြင့်အပျိုကညာ၏ Corontion
ထိုသူများအတွက်ကွပ်မျက်ပြီးနောက်သန့်ရှင်းသူတို့၏အလောင်းများကို၏မြင့်တက်လိုပဲ (cf. Matt. 27:52), အ Assumption တရားစီရငျရာနေ့အပေါ်သစ္စာရှိ၏ကိုယ်ထင်ရှားရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရန်ရှေ့ပြေးဖြစ်ပါတယ်, သူတို့ရကြလိမ့်မည်သည့်အခါ “ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအား … မိုဃ်းတိမ်၌အာကာသကောင်းကင်၌သခင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်” (1 သက်. 4:17).3 ကမျြးစာကိုကောင်းကင်သို့တစ်ဦးကိုယ်ထင်ရှားယူဆချက်များ၏အယူအဆဆန့်ကျင်ပါဘူး. သမ္မာကျမ်းစာတွင်, ဧနောက်သည်နှင့်ဧလိယသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ကိုယ်ထင်ရှားတက်ယူကြသည် (cf. ဗိုလ်ချုပ်. 5:24;2ကီလို. 2:11; ရှိ. 11:5). ကမျြးစာကိုအတိအလင်းမာရိကယူဆခဲ့ကြောင်းဖော်ပြမထားဘူးကြောင်းစစ်မှန်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျးကိုတူညီတဲ့လက္ခဏာသက်သေအားဖြင့်, ကမျြးစာကိုသူမ၏ Assumption ငွငျးပယျသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ပါဘူး.4 ထို့အပြင်, အ Assumption ၏တိုက်ရိုက်အကောင့်အညီကျမ်းစာလာသည်ကိုတွေ့သည်မဟုတ်စဉ်, ကပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကိုရည်မှတ်အချို့သောကျမ်းပိုဒ်ကနေပေါ်မူတည်ပြီးစေခြင်းငှါ, မာရိကအမျိုးအစား. သင်ျဘောကြောင့်ထိုနည်းတူသယ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့တ္ထု၏သန့်ရှင်းသောတန်ဆာကိုရွှေစင်နှင့်အတူမပျက်စီးနိုင်သောသစ်သားနှင့်မွမ်းမံလေ၏ဖန်ဆင်းခဲ့သည် (cf. ထွ. 25:10-11); ထိုနည်းတူအပျိုကညာသညျဘုရားသခငျ၏သားတျောကိုထမျးများအတွက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသန့်စင်ခြင်းနှင့်မပုပ်နိုင်သောအဖြစ်နှင့်ပြည့်စုံခဲ့သည်. မာရိရဲ့မပုပ်နိုင်သောအဖြစ်ကိုယျခန်ဓာဒါက, ပဋိညာဉ်တရားသစ်၏သင်ျဘော, တှငျဖျောပွထားသည်မိုဃ်းကောင်းကင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ် ဆာလံ 132:8, သောပြည်နယ်များ, “ထလော့, အိုထာဝရဘုရား, သင်နှင့်သင်၏ငြိမ်ဝပ်ရာအရပ်သို့သွားရ, ကိုယ်တော်နှင့်ကိုယ်တော်၏အစွမ်းသတ္တိ၏သေတ္တာတော်ကို။” ဟောငျး-ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ထူးဆန်းစွာသမိုငျးတှငျအခြို့မှာပျောက်ကွယ်ဒါကအဖြစ်ကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတကတော်ရဲ့ Assumption foreshadows.5 တမန်တော်ယောဟန်ကကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူ၏တစ်ဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်းဖမ်းမိသည်အထိအမြင့်မြတ်တန်ဆာကိုရာစုနှစ်က hidden ကျန်ရစ်, သူအတွက်ဖျောပွထားအဖြစ် ဗျာဒိတ်ကျမ်း: “ထိုအခါကောငျးကငျဘုံ၌ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်, နှင့်သူ၏ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ဗိမာန်တော်အတွင်းကိုတှေ့မွငျခဲ့ … . ကြီးစွာသောနိမိတ်လက္ခဏာနှင့်ယှဉ်ကောငျးကငျဘုံ၌ထငျရှား, နေရောင်နှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အဝတ်ကိုဝတ်, တကျိပ်နှစ်ပါးသောကြယ်တစ်ဦးရစ်သရဖူသူမ၏ခြေအောက်၌လသည်နှင့်သူမ၏ခေါင်းပေါ်မှာ” (11:19, 12:1). ပရဒိသုကိုယ်ထင်ရှားနေသောရွေးနှုတ်၏မိခင်ဂျွန်၏ရူပါရုံအ Assumption တစ်ဦးမျက်မြင်သက်သေအကောင့်ငါတို့သည်အနီးဆုံးအရာဖြစ်ပါသည်. သူကသူမသခင်ဘုရား၏အတက်မြန်းသည့်နေ့များအောက်ပါကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံခဲ့ကြောင်းရှင်းပြဖို့အပေါ်တတ်. “သူမရဲ့ကလေး,” သူမိန့်, “ဘုရားသခင်နှင့်ရာဇပလ္လင်တော်မှချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောခဲ့သည်, ထိုမိန်းမကားအတောသို့ပြေးကြ၏, ဘယ်မှာသူမကဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်သောအရပ်ရှိပါတယ်, တထောင်နှစ်ရာခြောက်ဆယ်ပတ်လုံးမွေးမြူခံရဖို့ရာအတွက်” (12:5-6). အလားတူပင်သူကပြောပါတယ်, “ထိုမိန်းမသည်သူမတောသို့မြွေမှပျံတက်စေခြင်းငှါကြီးစွာသောရွှေလင်းတ၏နှစ်ခုအတောင်ပံပေးထားခဲ့သည်, သူမတစ်ဦးသည်အချိန်မွေးမြူကြရမည်ရာအရပ်မှ, နှင့်အချိန်များ, တဝက်အချိန်” (12:14).6
အ Assumption အပေါ်အစောဆုံး extant အရေးအသားအမျိုးမျိုးသောပေါနှင့် pseudoepigraphical ကျမ်းများမှာ, ၏အထွေထွေခေါငျးစဉျအောကျလဲကျရာ အပျိုကညာမာရိ၏ကျမ်းပိုဒ် သို့မဟုတ် မာရိ၏သွားတာ. ဤအသက်အကြီးဆုံး, Leucius Karinus ခြင်းအားဖြင့်ဒုတိယရာစုအတွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ကြလို့ယုံကြည်, ယောဟန်၏တပည့်တစ်ဦး, ထိုတမန်တော်ခေတ်တစ်ဦးထံမှမူရင်းစာရွက်စာတမ်းအပေါ်မှာအခြေခံခံရဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်, မရှိတော့ extant သောဖြစ်ပါသည်.7
အမင်္ဂလာရှိ၏အပျိုစင်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအတွက်မပုပ်နိုင်သောအဖြစ်ခဲ့သည်အစောပိုင်းဘုရားကျောင်းရဲ့ယုံကြည်ချက်လုံးလုံးလြားလြားအ Assumption ထောက်ခံပါတယ်. အဆိုပါအမည်မသိ Diognetus မှပေးစာ (cf. 125), ဥပမာအားဖြင့်, လှည့်ဖြားမရနိုငျတဲ့အပျိုစင်အဖြစ်သူမ၏ရည်ညွှန်း.8 တကယ်တော့, မြားစှာသောရှေးဟောင်းစာရေးဆရာများ, အများဆုံးအထူးသူတော်စင် Justin အအာဇာနည်ဗိမာန် (ဃ. အဖြစ်. 165) နှင့်လီယွန်၏ Irenaeus (ဃ. အဖြစ်. 202), သူမ၏အပြစ်အတွက်ဧဝသူမ၏သစ္စာရှိမာရိသည်နှိုင်း. ရောမမြို့၏စိန့် Hippolytus (ဃ. 235), Ireneaus ၏ကျောင်းသားတစ်ဦး, အနှိုင်းယှဉ်လျှင်မာရိရဲ့အသားကို “မပျက်စီးနိုင်သောကျွန်းသစ်” သင်ျဘော၏ (ဆာလံအပေါ်မှတ်ချက်ပြု 22). အဆိုပါ ကိုယျတျော၏လက်အောက်တွင် ဆုတောင်းပဌနာ, နှစ်လယ်ပိုင်းတတိယရာစုအကြောင်းကိုအတွက်ရေးစပ်, မာရိကကိုခေါ် “တယောက်တည်းစင်ကြယ်သောတပါးတည်းသာမင်္ဂလာ။”
ဆီးရီးယားရဲ့စိန့်သည်ဧဖရိမ် ထိုသူငယ်တော်ဖွားမြင်အပေါ်ဓမ္မသီချင်း, နှစ်လယ်ပိုင်းစတုတ္ထရာစုကနေ, ပြန်ပြောပြကြောင်းပုံရိပ်သုံးပြီး ဗျာဒိတ်ကျမ်း 12:4, မာရိသညျကောငျးကငျဘုံမှသူမ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏အစီးအနင်းကြိုဟောဟန်, ဟုဆို, “ငါသယ်ဆောင်သောသူငယ်ငါ့ကိုသယ်ဆောင်ခဲ့သည် … . သူကသူ့တောင်တော်အမွေးအောက်သို့ငုံ့နှင့် ယူ. သူ၏အတောင်ပံအကြားကြှနျုပျကိုသှငျးထားနှင့်လေထုသို့မြင့်တက်” (17:1). တွင် 377, မီစိန့် Epiphanius wrote, “ဘယ်လိုသန့်ရှင်းသောမာရိသည်သူမ၏အသားနှင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်စားမည်မဟုတ်, သူမ unchaste မဟုတ်ခဲ့ကတည်းက, မဟုတ်ဖျက်သိမ်း, မဟုတ်သူမအစဉ်အဆက်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ကျူးလွန်ခဲ့, သူမအဖြစ်ဝေးဇာတိလုပ်ရပ်စိုးရိမ်နေကြအဖြစ်မှားဘာမှကိုပြုဘယ်တော့မှကတည်းက, ဒါပေမဲ့ stainless ကျန်ရစ်?” (Panarion 42:12). တချို့ကသူတင်းမာနေအနာဂတ်၌ကောင်းကင်သို့မာရိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဝင်ပေါက်၏ဤနေရာတွင်ပြောသောကတည်းကသူသည် Assumption ကိုယုံကြည်ကြပါပြီနိုင်ဘူးအကြံပြုခဲ့ကြ. သို့သျောလညျးသူအတူတူပင်စာရွက်စာတမ်းနောက်ပိုင်းမှာမှတ်ချက်ချ, “သူမအသေခံလေပြီခဲ့လျှင်, … ထို့နောက်သူမသည်အာဇာနည်နှင့်အတူဘုန်းအသရေရရှိခဲ့, နှင့်သူမ၏ကိုယ်ခန္ဓာ … မင်္ဂလာ၏ repose မွေ့လျော်သောသူတို့တွင်ကျိန်းဝပ်” (Ibid. 78:23; အလေးပေးဆက်ပြောသည်). သူမသေဆုံးအပေါ်ခန့်မှန်းပြောဆိုချက်များ, သူတစ်ခုခုပြောသွားလေ၏
သူမသေဆုံးသို့မဟုတ်မသေခဲ့, … သူမသင်္ဂြိုဟ်လေ၏သို့မဟုတ်သင်ျဂွိုဟျမခံခဲ့ရ. … သမ္မာကျမ်းစာ၌ရိုးရှင်းစွာတိတ်ဆိတ်စွာဖြစ်ပါသည်, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် prodigy ၏တန်ခိုးအာနုဘော်၏, နိုင်ရန်အတွက်အလွန်အကျွံအံ့သြစရာနှင့်အတူယောက်ျား၏စိတ်ကိုဒဏ်ခတ်ဖို့မ. …
သန့်ရှင်းသောအပျိုစင်အသေဖြစ်၏နှင့်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံပြီဆိုရင်, ဧကန်အမှန်သူမ၏အစွမ်းသတ္တိအလွန်ကြီးစွာသောဂုဏ်အသရေနှင့်အတူဖြစ်ပျက်; သူမ၏အဆုံးအများဆုံးစင်ကြယ်ကြီး virginit အားဖြင့်သရဖူဆောင်း. …
သို့မဟုတ်သူမအသက်ရှင်ဖို့ဆက်လက်. အကြောင်းမူကား,, ဘုရားသခင်အား, ဒါကြောင့်သူကအလိုရှိသမျှကိုလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်; သို့သော်ငြားလည်း, အဘယ်သူမျှမကသူ့ကိုအဆုံးခဲ့အတိအကျသိ (Ibid. 78:11, 23).
Epiphanius မာရိရဲ့သွားတာ၏အသေးစိတ်မသိကြောင်းဿုံနားလည်–ခရစ်ယာန်တွေကိုဆဲ၏အသေးစိတျမသိရပါဘူးကြောင့်တမန်တော်သူတို့ကိုယ်သူတို့ဖြစ်စေမသိခဲ့ပါဖွယ်ရှိသည်, သူမ၏ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုပူးတွဲသင်္ချိုင်းဂူအတွင်းမှသိမ်းယူခဲ့သည်များအတွက်.9 အခြားအစောပိုင်းစာရေးဆရာများနှင့်မတူဘဲ, သို့သော်, Epiphanius မိမိအဘို့အသေးစိတ်တီထွင်ရှောင်ရှား. သူရာအရပျသိမ်းယူခဲ့အတိအကျဘာမသိခဲ့ပါသော်လည်း, သူသိသည်, မာရိရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောမြတ်မှုကို၏အလငျး၌, သူမ၏သွားတာနိမိတ်ဖြစ်ရပြီခဲ့ရတယ်ကြောင်း–အလိုအရာတစ်ခုခု “အလွန်အကျွံအံ့သြစရာနှင့်အတူယောက်ျား၏စိတ်ကိုဒဏ်ခတ်”–သူသင်္ချိုင်းတွင်း၌ကျန်ရစ်ခဲ့ကြပါဘူးနိုင်ကြောင်း. “ယောဟန်၏ပေါကလစ်ခုနှစ်တွင်,” သူလည်းသတိပြု, “ကျနော်တို့နဂါးအထီးကလေးမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ခဲ့သောထိုမိနျးမမှာကိုယ်ကိုကိုယ်လှဲချကြောင်းဖတ်; ဒါပေမယ့်ရွှေလင်းတအတောင်မိန်းမအားအပ်ပေးတော်မူခဲ့ကြ, သူတောသို့ပျံသန်း, နဂါးသူမ၏မရောက်ရှိနိုင်ဘယ်မှာ. ဒီမာရိရဲ့အမှု၌ဖြစ်ပျက်နိုင် (ဗြာ. 12:13-14)” (Ibid. 78:11).
ပဉ်စမရာစုအစမှာ, သို့မဟုတ်အစောပိုင်းက, မာရိ၏အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်၏ပှဲ–ကြောင်း, သူမ၏သွားတာ၏အထိမ်းအမှတ်–အရှေ့မရပါသို့စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်, အသင်းတော်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးခံရသောပွဲကာလ၏အသက်အကြီးဆုံးအကြားကအားမရ.10 ယခုနှစ်ခန့် 400, ယေရုရှလင်မြို့ Chrysippus အပေါ် commented ဆာလံ 132, “အဆိုပါအမှန်တကယ်တော်ဝင်သေတ္တာ, အများဆုံးအဖိုးတန်သေတ္တာ, ထိုအစဉ်အဆက်-ကညာခဲ့ Theotokos; အားလုံးသန့်ရှင်းခြင်း၏ဘဏ္ဍာကိုခံသောသင်ျဘော” (ဆာလံတွင် 131(132)).
ဒီတစ်ချိန်တည်းကာလတစ်ဦးထံမှရှေးရိုးစွဲစာရေးဆရာ, ထိုအောက်တွင် operating ကလောင်နာမကို သာဒိ၏စိန့် Melito ၏, တစ်ဦးအနီး-ခေတ်ပြိုင် Leucius ၏, ရှိခြင်းအဘို့သူ့ကိုကဲ့ရဲ့ “တမန်တော်များ၏သွန်သင်ချက်နှင့်အတူသဘောမတူဘူးသောသူ၏ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်များ expounding အားဖြင့်အများဆုံးရှေးခေတ်စာသားကိုယိုယွင်း” (Bagatti, et al ။, p. 11). ဒီစာရေးဆရာရဲ့ Assumption ၏စစ်မှန်တဲ့အကောင့်ပြန်ပေးဖို့ကွိုးစား, တော်မူသောသူ Leucius ခဲ့စွပ်စွဲ “ဆိုးသောကလောင်နှင့်အတူယိုယွင်း” (သန့်ရှင်းသောဘုရားကညာ၏အ Pass, စကားချီး).
အကြောင်းခုနှစ်တွင် 437, စိန့် Quodvultdeus အချင်းမိန်းမအတွက်ဖော်ထုတ် ဗျာဒိတ်ကျမ်း 12 အမင်္ဂလာရှိ၏အပျိုစင်အဖြစ်, သတိပြု, “သင်တို့တွင်အဘယ်သူအားမျှလျစ်လျူရှုစို့ (အမှန်မှာ) နဂါးက (တမန်တော်ယောဟန်၏ပေါကလစ်အတွက်) မာရ်နတ်သည်; ထိုကညာမာရိသည်နေတဲ့အကြောင်းအချက်သည်ကိုသိရ, ထိုစင်ကြယ်တစ်, အဘယ်သူသည်ငါတို့အစင်ကြယ်၏ဦးခေါငျးကိုဘွားမြင်လေ၏” (တတိယအချက်အ Homily 3:5).
ပဉ္စမရာစုနှစ်အလယ်အကြောင်းခုနှစ်တွင်, ယေရုရှလင်မြို့စိန့် Hesychius wrote, “ကိုယျတျော၏သနျ့ရှငျး၏သေတ္တာ, အကယ်စင်စစ်ဗာဂျင်း theotokos. ကိုယျတျောသပုလဲဖွစျတျောလျှင်သူမသင်ျဘောဖြစ်ရပါမည်” (သန့်ရှင်းသောဘုရားကိုမာရိအပေါ် Homily, ဘုရားသခငျ၏မိခင်). ပတ်ပတ်လည် 530, Oecumenius ၏ဟုဆိုသည် ဗျာဒိတ်ကျမ်း 12, “မှန်ကန်စွာဗျာဒိတ်ရူပါရုံကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မသည်မြေကြီးပေါ်မှာသူမကိုပြသတတ်, ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်၌ရှိသကဲ့သို့စင်ကြယ်သော” (အ Apocalpyse အပေါ်မှတ်ချက်ပြု). ဆဌမရာစုအဆုံးအနီး Assumption ၏အရေးအသား, Tours မှ၏စိန့်ဂရက်ဂိုရီ (Epiphanius မတူဘဲ) ၏ဖွစျပှားအသေးစိတ်ကိုကိုရှောင်ကြဉ်ဘဲ crossing များကို အကွောငျးအရာ. “ထိုအခါ,” ဂရက်ဂိုရီ wrote, “နောက်တဖန်ထိုသခင်အားဖြင့်ရပ်လျက် (တမန်တော်); သန့်ရှင်းသောကိုယ်ခန္ဓာ (မာရိ၏) လက်ခံရရှိခဲ့ပြီးမှ, သူကပရဒိသုသို့မိုဃ်းတိမ်ကိုယူစေခြင်းတို့ကိုမှာထား” (အံ့ဖွယ်ရှစ်စာအုပ်များ 1:4).
အသင်းတော်ရဲ့ Marian သှနျသငျ၏ဝေဖန်သူများအ Assumption ၏အစောဆုံးသိအကောင့်အသစ်များ၏ပေါအရေးအသား၌တွေ့ကြသည်ဟူသောအချက်ကိုတာကြပြီ, နှင့်ဘုရားကျောင်းအဘတို့နှောင်းပိုင်း-စတုတ္ထရာစုနှစ်မတိုင်မှီကစကားမပြောခဲ့ပါကြောင်း.
ဒါဟာအစမှန်, သို့သော်, အဘတို့အ Assumption အတွက်မှန်ကန်သောယုံကြည်ချက်မှမကြည့်ခဲ့ကွောငျး; သူတို့ရိုးရိုးဒီကိစ္စကိုအပေါ်တိတ်ဆိတ်စွာကျန်ရစ်–မကြုံစဖူးရပ်တည်ချက်ကအယူမှားသှနျသငျခဲ့လျှင်, အထူးသဖြင့်သစ္စာရှိသောအကြား၎င်း၏ပျံ့နှံ့ပေးထား. ဒါဟာမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်, တကယ်ပါပဲ, မာရိရဲ့ Assumption ၏အယူအဆက, သောကလူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြတ်မှုကိုသောသူ, ထိုနောစတတို့တွင်အရှိကြတယ်လို့နိုင်, သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုတ်ချကြောင်းပေးထား. အဆိုပါ Apocrypha, တကယ်တော့, မကြာခဏယူမှား၏လုပျငနျးမဟုတ်ကြ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ရင်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေပြည့်နှက်နေလေသည်ခဲ့ကြကြောင်း, ခရစ်တော်နှင့်သူတော်စင်များ၏ဘဝကနေအမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်များအပျေါမှာအသေးစိတျစည်းကြပ်ဖို့ရှာကြံရှေးရိုးစွဲခရစ်ယာန်များ၏. apocryphists အ Assumption ၏ဇာတ်လမ်းအလှဆင်နေစဉ်, သူတို့ကတီထွင်ဘူး. အဆိုပါအချက်ကိုကြောင်း crossing များကို ခရစ်ယာန်လောကရှိနေရာတိုင်းတည်ရှိ, ဘာသာစကားမျိုးစုံအတွက်ထင်ရှားကျော်ကြားသော, ဟီဘရူးအပါအဝင်, ဂရိ, လက်တင်, Coptic အဘိဓါန်, Syriac အဘိဓါန်, Ethiopic, နှင့်အဘိဓါန် Arabic, မာရိရဲ့ Assumption ၏ဇာတ်လမ်းအစောပိုင်းရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးပြန့်နှံ့ခဲ့သည်ထေူနှင့်, ထိုကွောငျ့, တမန်တော်ဇာစ်မြစ်၏.
အသင်းတော်အစဉ်အဆက်တစ် spurious သဘောသဘာဝ၏အကျင့်တို့အပေါ်မှာမှီခိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အန္တရာယ်ကိုသိခဲ့စဉ်တွင်, ဒါကြောင့်အမှနျတရားစေ့အများအပြားထိုကဲ့သို့သောအမှုတော်တို့ကိုအတွက်မနိုင်ခြင်းမရှိဟုငြင်းဆိုမရနိုငျ. ပြန်ခေါ်, ဥပမာအားဖြင့်, စိန့်ယုဒအဖို့ကိုရည်ညွှန်းကြောင်း မောရှေ၏ယူဆချက် နှင့် ပထမဦးစွာဧနောက်သည် မိမိအဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် အက္ခရာ (ကြည့်ရှု ယုဒ 1:9, 14 ff ။). မူလအစပညာရှိရှိလေ့လာ:
ဒီလျှို့ဝှက်ချက်အရေးအသားအများအပြားယောက်ျားကထုတ်လုပ်ခဲ့ကြကြောင်းမသိမဟုတ်, မိမိတို့အပြစ်အဘို့အကျော်ကြား. … ထိုကြောင့်ငါတို့သည်သန့်ရှင်းသူတို့၏နာမတော်အောက်မှာဖြန့်ဝေသောသူအပေါင်းတို့သည်ဤလျှို့ဝှက်အရေးအသားလက်ခံထဲမှာသတိကိုသုံးရပါမည် … ထိုသူအချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မာကျမ်း၏သမ္မာတရားကိုဖျက်ဆီးဖို့ကျမ်းစာ၌ရေးထားလျက်ရှိသတည်းနှင့်တစ်ဦးအယူမှားသှနျသငျစည်းကြပ်သောကြောင့်. သို့သော်ငြားလည်း, ကျနော်တို့လုံးဝကျမ်းစာ၌အပေါ်အလင်းသွန်းလောင်းဘဲအပြစ်လွတ်အတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်အံ့သောငှါအရေးအသားငြင်းပယ်မထားသင့်. သမ္မာကျမ်း၏အကြံပေးချက်ကိုနားထောငျတျောထွက်သယ်ဆောင်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောယောက်ျား၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုက: “စာမေးပွဲအရာအားလုံးကို; ကောင်းသောအရာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထား” (1 သက်. 5:21) (မဿဲအပေါ်ဝေဖန် 28).
တွင် 494, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Gelasius စိန့်, ခရစ်ယာန်ကမ္ဘာအနှောငျ့ကမေးခွန်းထုတ်စရာရေးသားခဲ့သော၏မြောက်မြားစွာဘာသာရေးအရေးအသား၏အလားအလာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆန့်ကျင်သစ္စာရှိသောစောင့်ရှောက်ခြင်းငှါရှာကြံ, မိမိအနောင်တော်များကရေးဆွဲ Canonical စာအုပ်များစာရင်း reissued, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးစိန့် Damasus, လက်ခံနိုင်ဖွယ်နှင့်လက်မခံနိုင်အပို-သမ္မာကျမ်းစာအုပ်တွေတစ်ရှည် catalog နှင့်အတူ coupled.
အသင်းတော်များ၏ပြိုင်ဘက်သည့် Assumption တခုတခုအပေါ်မှာပေါအရေးအသား Gelasius အတွက်တားမြစ်ထားစာအုပ်တွေတို့တွင်ပါဝင်သောအချက်တစ်ခုပြဿနာရာ၌ခန့်ထားပြီ’ decre, ဒါပေမယ့်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကို Assumption တစ်ခုပေါအကောင့်ပြစ်တင်ရှုတ်ချ, ဒါပေါ့, မ Assumption သူ့ဟာသူ.
အခြားရှေးရိုးစွဲယုံကြည်ချက်ပေါအကောင့်အသစ်များ၏ထိုနည်းတူအမိနျ့တျောအတွက်ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြသည်–ကို ဂျိမ်း၏ Protoevangelium, ဥပမာအားဖြင့်, ထိုသူငယ်တော်ဖွားမြင်အတူအပေးအယူ; နှင့် ပေတရု၏တမန်တော် ရောမမွို့၌ပေတရု၏သာသနာပြုလှုပ်ရှားမှုနဲ့အာဇာနည်နှင့်အတူအပေးအယူ. ပို. ပင်အထိ, Tertullian ၏အရေးအသားပိတ်ပင်ထားကြသည်, သူရေးထားသောစာသော်လည်း, ဥပမာအားဖြင့်, ရိုးရှင်းစွာပိုင်ခွင့် ဗတ္တိဇံ နှင့် နောင်တသံဝေဂ, ဤအဘာသာရပ်များအပေါ်ရှေးရိုးစွဲအနေအထားကိုခုခံကာကွယ်. Gelasius မ’ ထိုဗတ္တိဇံ၏ငြင်းပယ်ခံရခြင်းနှင့်နောင်တဤစာအုပ်များပမာဏ၏ပြစ်တင်ရှုံ့ချ, ထို့နောက်, သို့မဟုတ်ပါက Tertullian ရဲ့ဇာတ်ကောင်များ၏မေးခွန်းနှင့်အတူပိုမိုလုပ်ဆောင်ဖို့ရှိသည်ပါဘူး?
ရှင်းနေသည်မှာ, ထိုအတွက်စာအုပ်၏ပိတ်ပင်ခြင်းမှာ Gelasian အမိန့် တစ်လက္ကားစာအုပ်ကိုရဲ့ဘာသာရပ်မှုငြင်းပယ်ခံရသို့မဟုတ် contents တွေကိုဖြစ်ဟုဆိုမရနိုငျ. မြားစှာသောကိစ္စများတွင်, ပိုပြီးပညာသင်ဆုသည်ဤစာအုပ်များကနေအမှန်တကယ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်ဒြပ်စင်ထုတ်ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးခြင်းငှါအသင်းတော်အားဖြင့်လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း. အချိန်အတောအတွင်း, ပိတ်ပင်မှုအောက်မှာသူတို့ကိုအားမရသူတို့ကိုပတျဝနျးကငျြအမရေရာမှုပေးသောသမ္မာသတိရှိသောခဲ့သည်.11
ထိုထဲတွင်ရှာတွေ့မှရှာဖှသေူမြားအတှကျ Gelasian အမိန့် ပုပ်ရဟန်းမင်းမှားယှငျးနိုငျ၏အချို့သောစေ့စပ်ညှိနှိုင်း, အဲဒါကိုရုံတစ်စည်းကမ်းအရေးယူမှုဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကစာအုပ်၏တားမြစ်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့မမှားယွင်းနှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘာမှမရှိကြောင်းရှင်းပြသင့်တယ်, တရားသေအယူဝါဒ၏ပုံစံလုပ်ရန်နှင့်အတူချိတ်ဆက်မ. သဘာဝအားဖြင့်, တစ်စည်းကမ်းအရေးယူမှုပြောင်းလဲမှုဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်. ကိုယ်ကသာဒါကာလပတ်လုံးရိပ်မိခြိမ်းခြောက်မှုတည်ရှိအဖြစ်အရပ်ဌာန၌ရပ်တည်; ခြိမ်းခြောက်မှုလွန်ပြီတခါ, အကဲ့ရဲ့လျက်ရှိ၏. ဒီအထူးသဖြင့်အမှု၌, ကမျြးစာ၏ canon လက်ခံမှုအတွက်ကြီးပြင်းအဖြစ် Apocrypha ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့်မှေးမှိန်နှင့်တားမြစ်ချက်ပေါရာဏဖြစ်လာခဲ့သည်.
ဤသည် saintly ရှေးဟောင်းပစ္စည်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ကြည်ညိုဘို့ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ penchant ပေးထားအမှန်ပင်ထူးခြားသောအထောက်အထားဖြစ်ပါသည်–အဆိုပါအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်း၏အစောပိုင်းကာလမှနောက်ကျောစတငျရသည့်အလေ့အကျင့် စိန့် Polycarp ၏အာဇာနည်, ဒုတိယရာစုအလယ်၌ရေးစပ်, ပြပွဲ. ↩
ကက်သလစ်အစဉ်အလာမာရိသညျအလုပျသမားဝဒေနာကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ခဲ့ကြပေမယ့်, ဒါကြောင့်သူမအမှန်ပင်ဿုံသူမရဲ့သားညီနိုင်ရန်အတွက်အသေသတ်ခြင်းကိုခံရခဲ့ပါကြောင်းထင်ထားသည်, အပြစ်မဲ့လက်ခံသည်သေခြင်းသော်လည်းအဘယ်သူသည် (cf. ဖီး. 2:5 ff ။). အဆိုပါ Assumption ၏တရားသေအယူဝါဒ defining အတွက်, Pius XII သူမကွယ်လွန်သွားခဲ့သောအချို့သောအဘို့ဟုရှောင်, မျှသာသူမကခဲ့ဖျော “သူမ၏မွကွေီးအသက်တာ၏သင်တန်းပြီးစီး” (အဆိုပါရက်ရက်ရောရော 44). ↩
အဆိုပါ ကက်သလစ်အသင်းတော်၏ဓမ်မပုစ်ဆာ သွန်သင်, “အဆိုပါမင်္ဂလာဗာဂျင်း၏ Assumption သူမ၏သားတော်ကိုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအတွက်အနည်းကိန်းပါဝင်မှုနှင့်အခြားခရစ်ယာန်များ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏မျှော်လင့်ဖြစ်ပါတယ် … . သူမသည်သူမ၏သားတော်ကိုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏ဘုန်းအသရေရှိနှင့်ပြီးသားရှယ်ယာ, မိမိအခန္ဓာကိုယ်အပေါငျးတို့သင်များ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းထားချက်အရ” (966, 974). ↩
အဖြစ်ကောင်းစွာဓမ္မသစ်ကျမ်းကနေချန်လှပ်ထားပါသည်သောတမန်တော်ဘုရားကျောင်း၏ဘဝအသက်တာတွင်အခြားသိသာထင်ရှားသောဖြစ်ရပ်များရှိပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောပေတရုနှင့်ပေါလု၏အာဇာနည်အဖြစ်, ယခုနှစ်ထဲတွင်ရောမ Legion ဖြင့်ယေရုရှလင်နှင့်အဗဒ္ဒုန် 70. ယင်းအလိုအရ Muratorian တစ်ပိုင်းတစ်စ, ဒုတိယရာစုနှောငျးပိုငျးတှငျအရောမမွို့ရှိရေးစပ်, လုကာသာအတွင်ထည့်သွင်း တမန်တော်၏တမန်တော် မိမိမျက်စိနဲ့မြင်တွေ့ခဲ့ဖြစ်ရပ်များ. လုကာသူအမှန်တကယ် Assumption မှတျတမျးတငျထားမခံခဲ့ရဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်ရန်ကူညီပေးသည်မသိမမြင်ရဖူးသောအရာတို့ကိုအရေးအသားရှောင်ကြဉ်ကြောင်း, ကသင်္ချိုင်းဂူအတွင်းမှအရပ်ဌာနကိုယူဘို့. သခင်ဘုရား၏တက်ကြွမတူဘဲ, အမြားအပွားများကမြင်ကြတဲ့လူထုအဖြစ်အပျက်, အဆိုပါ Assumption မျှမျက်မြင်သက်သေများခဲ့. ↩
ဒုတိယအချက်မှာမက္ကဘီး 2:5 ယေရမိကကြိုတင်ယေရုရှလင်မြို့၌၏ဗာဗုလုန်ကျူးကျော်ရန်တောင်ပေါ်ကနေဗောအပေါ်တစ်ဦးဥမင်ထဲမှာသင်ျဘောကိုတံဆိပ်ခတ်ကပြောပါတယ် 587 B.C. (cf.2ကီလို. 24:13, et al ။). ↩
ပရိုဣသရေလအမျိုး၏တစ်ဦးသင်္ကေတပုံဒါမှမဟုတ်ဘုရားကျောင်းဖြစ်စေအတိုင်းဤအမျိုးသမီးကိုမြင်ရလေ့ရှိတယ် (cf. ဗိုလ်ချုပ်. 37:9). ကက်သလစ်ဘာသာသည်ဤအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူလက်ခံ, ဒါပေမယ့်တိကျတဲ့လမ်းကိုမာရိအတွက်ထည့်သွင်းရန်သူတို့အကိုတိုးချဲ့, ဘုရားသခင်၏လူတို့၏အဂျ. ဣသရေလအမျိုးကိုပုံဆောငျသဘောအရခရစ်တော်အားယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏; မာရိကစာသားကိုယ်တော်ကိုယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏. ဤကျမ်းပိုဒ်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးအတွက်, စိန့် Quodvultdeus (ဃ. 453), ကားသေ့ချြ၏ဆရာတော်နှင့်စိန့်သြဂတ်စတဲ့တပည့်, မာရိသညျကြောင်းရေးသားခဲ့သည် “ဒါ့အပြင်သူ့ကိုယ်သူအတွက်သန့်ရှင်းသောဘုရားကျောင်းတစ်ခုကိန်းဂဏန်းခံပြီး: အမည်ရ, ဘယ်လိုသားကိုဆောင်သောစဉ်, သူမတစ်ဦးကညာကျန်ရစ်, အချိန်တစ်လျှောက်လုံးကိုအသင်းတော်သူမ၏အဖွဲ့ဝင်သမုတ်သောဒါ, သေးသူမ၏အပျိုစင်ဆုံးရှုံးပါဘူး” (အဆိုပါ Creed အပေါ်တတိယ Homily 3:6; လက်ဇန္ဒြီးယား၏ Clement ကိုလည်းတွေ့မြင်, အဆိုပါကလေးများ၏နည်းပြ 1:6:42:1).
ဘုရားသခင်၏လူလွတ်၏ motif “ရွှေလင်းတအတောင်ပေါ်” မှခိုလှုံရာအရပ်ကိုရဓမ်မဟောငျးကမျြးတလျှောက်လုံးတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် (ကြည့်ရှု ထွ. 19:4; ဆာ. 54 (55):6-7; ဟေရှာ. 40:31, et al ။). ဘုရားသခရဲ့ကတိကို “တောသို့လွတ်မြောက်ရန်” အလှနျသည့် Assumption ပြည့်စုံနေပါတယ်, မာရိသညျကိုယျတျော၏လူများ၏ဉီးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခြင်း.
အတွက်သင်္ကေတညွှန်းဆို ဗျာဒိတ်ကျမ်း 12 အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြာချိန်မှ, “တထောင်နှစ်ရာခြောက်ဆယ်ရက်အတွင်း” နှင့် “အချိန်များအတွက်, နှင့်အချိန်များ, တဝက်အချိန်” (6, 14), နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းများ၏ကာလကိုကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါ, သောဘုရားကျောင်းသည်းခံရ၏ပါလိမ့်မယ်, ခရစ်တော်၏လာဒုတိယဖို့ကြိုတင်.
လင်္ကာ 12:17 မာရ်နတ်ကပြောပါတယ်, အဆိုပါအမျိုးသမီးရဲ့ထွက်ပေါက်များက infuriated, ထွက်မသတ်မှတ် “သူမ၏အမျိုးအနွယ်၏ကျန်အပေါ်စစ်အောင်, ဘုရားသခငျ၏တပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ယေရှုအားသကျသခေံသောသူတို့အပေါ်မှာ။” ခရစ်တော်၏နောက်လိုက်များထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသည် “သူမ၏အမျိုးအနွယ်၏ကျန်” အားလုံးခရစ်ယာန်များ၏မိခင်အဖြစ်မာရိသည်များအတွက်ဘုရားကျောင်းရဲ့ကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. ထောက်ခံပါသည် (cf. ဟေရှာ. 66:8; ယောဟန်သည် 19:26-27). ↩
တစ်ကြိမ်မှာနေစဉ် crossing များကို အဘယ်သူမျှမအစောပိုင်းကစတုတ္ထရာစုထက်အစပြုရှိသည်ဟုယူဆခဲ့သည်, Leucius များတွင်အသုံးပြုအချို့သောဘာသာရေးအသုံးအနှုန်းများ’ စာရွက်စာတမ်းဖြစ်စေဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယရာစုတစ်ခုဇာစ်မြစ်ကိုအတည်ပြု (Bagatti, et al ။, p. 14; Bagatti သူ့ကိုယ်ပိုင်အကျင့်ကိုကျင့်ကိုးကား, S က. ပေတရု “မာရိ၏ dormition,” စစ. 42-48; အပျိုကညာ၏မရဏ၏အစဉ်အလာအပေါ်ရှာဖွေမှု, စစ. 185-214). ↩
အမှန်တကယ်စာသားကိုဖတ်: “သငျသညျပင်၏အသီးကိုထမ်းထားလျှင် (အသိပညာ) နှင့်၎င်း၏အသီးဆွတ်, သငျသညျအစဉ်အမြဲဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌နှစ်လိုဖွယ်သောအမှုအရာအတွက်စုဆောင်းပါလိမ့်မည်, မြွေမထိနိုင်ပြီးမုသာမညစ်ညူးစေနိုင်သည်ကိုအမှုအရာ. ထိုအခါဧဝကိုလှည့မဟုတ်ပါ, သို့သော်ဗာဂျင်းယုံကြည်စိတ်ချတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်” (Diognetus မှပေးစာ 12:7-9). ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့်စပ်လျဉ်း, စိရယျလျက c. ရစ်ချတ်ဆန်မှတ်ချက်များ, “ဒါဟာစာရေးသူဘုံ Patristic ဆနျ့ကငျြဘဖော်ပြနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းမျှမျှတတရှင်းပါတယ် … ဧဝကများအကြား, သေမင်း၏နားမထောင်မိခင်, နဲ့ Mary, အသက်တာ၏နာခံမှုရှိတဲ့မိခင်, အဆိုပါအရာအမှု၌ parthenos စာသား၏မင်္ဂလာရှိသောဗာဂျင်းမာရိသညျဖွစျလိမျ့မညျ” (အစောပိုင်းခရစ်ယာန်အဘတို့, နယူးယောက်: Collier စာအုပ်များ, 1970, p. 224, ဎ. 23). Hilda Graef concurred, ဟုဆို, “ဒါဟာနီးပါးမဆိုထပ်မံရှင်းပြခြင်းမရှိဘဲမာရိသည်ဧဝကိုဟုခေါ်ကြသည်လျှင်အဖြစ်ပုံရသည်” (မာရိသညျ: အယူဝါဒနှင့်ကျိန် ဆို. ပူဇော်၏သမိုင်း, vol. 1, နယူးယောက်: Sheed နှင့်ရပ်ကွက်, 1963, p. 38). ↩
အဆိုပါမတူဘဲ crossing များကို အကောင့်, သောတမန်တော်မာရိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းကင်သို့ပို့ဆောင်ထားကြောင်းမျက်မြင်မလုပ်ပဲ, သူမဇန်နဝါရီလပေါ်တွင်အသေခံမယ့်အစဉ်အလာရှိ 18 (Tobi 21), ဒါပေမယ့်သူမ၏အချည်းနှီးသောသင်္ချိုင်းသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမဟုတ်ခဲ့ 206 သြဂုတ်လအပေါ်အကြာတွင်ရက်ပေါင်း 15 (MESORAH 16) (Graef တွေ့မြင်, မာရိသညျ, vol. 1, p. 134, ဎ. 1; ရေးသားသူ Dom Capelle ကိုးကား, သတင်းစာများ Theologicae Lovanienses 3, 1926, p. 38; မစ္စတာ. ဂျိမ်း, အဆိုပါပေါဓမ္မသစ်ကျမ်း, 1924, စစ. 194-201). ↩
အဆိုပါသူငယ်တော်ဖွားမြင်၏အဘို့ဆောင်သောပွဲ (တနည်း,, ခရစ္စမတ်) အစောပိုင်းစတုတ္ထရာစုအတွင်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည်, ကွန်၏နန်းစံစဉ်ကာလအတွင်း. တက်မြန်းသည့်နေ့များ၏ပှဲပဉ္စမရာစုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်, မူလကပင်တေကုတ္တေ၏ပှဲတှငျပါဝငျခဲ့ဘဲလျက်. ↩
ဒီလိုမျိုး, အသင်းတော်သူမကပြပွဲစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုအဘို့သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်သည်အထိတစ်ဦးအထူးသဖြင့် TV မှာပြသကြည့်ရှုရန်သူမ၏ကလေးများကိုတားမြစ်ခဲ့သူမိခင်ဆင်တူ. အဆိုပါဘုရားကျောင်းသည်အမြဲတမ်းယုံကြည်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရား၏ဥာဏ်ပညာကိစ္စရပ်များအတွက်သတိ၏ဘေးထွက်အပေါ်ရာ၌မှားယွင်းလျက်ထားပါတယ်. ကြောင်းကိုစဉ်းစားပါ, ပိုပြီးမကြာသေးမီက, Avila ၏သူတော်စင် Teresa (ဃ. 1582) နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ဂျွန် (ဃ. 1591), ယခုအသင်းတော်များ၏ဆရာဝန်များအဖြစ်လေးစားကြည်ညို, ယူဖောက်ပြန်၏သံသယအပေါ် Inquisition ခြင်းဖြင့်စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ကြ. အလားတူပင်, စိန့် Faustina Kowalska ၏ဒိုင်ယာရီ (ဃ. 1938), အကြှနျုပျ၏ Soul အတွက်မြင့်မြတ်သောကရုဏာ, တစ်ကြိမ်မှာဘုရားကျောင်းဓမ်မပညာရှငျမြားအားဖြင့် heterodox အဖြစ်ပယ်ချခံခဲ့ရ, ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဂျွန်ပေါလ်မဟာအောက်တွင်အရာရှိတဦးကခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့. အဆိုပါဒိုင်ယာရီမှာတွေ့ရှိ Faustina ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်များ, တကယ်တော့, ဘုရားသခငျ့ကရုဏာ၏ပှဲ၏အအဖွဲ့အစည်းမှဦးဆောင်ကြပါပြီ, အသင်းတော်အတွက်ယခုတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဂုဏျ. ↩